ကျောက်ဖြူသတင်း | ngalone
← မောင်တောနယ်စပ် အစွန်အဖျား ကျေးရွာများတွင် ဆရာမများအစား ဆရာများဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆရာများကို အခြေခံစစ်ပညာ သင်ပေးမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ပြောကြား
ငလုံးရခိုင်​သတင်းစုစည်းမှူ (v4.0) →
ယနေ့နံနက်သမီးရည်းစားနှစ်ဦး ဓါးထိုးမှုဖြစ် ပြီး နှစ်ဦးလုံးသေဆုံး သွားကြောင်းသိရသည်။ ကောင်မလေး မိမိအိမ် မှ ဘဏ် သို့အလာ ရည်းစားဖြစ်သူ ကောင်လေး နှင့်စကားများပြီး
ကောင်မလေးကို ဓါးဖြင့် ထိုးပြီး မိမိကိုယ်ကို ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← မောင်တောနယ်စပ် အစွန်အဖျား ကျေးရွာများတွင် ဆရာမများအစား ဆရာများဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆရာများကို အခြေခံစစ်ပညာ သင်ပေးမည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ပြောကြား